မရဲ့ မောင်လေးနဲ့ မောင်လေးရဲ့ မမကြီးတွေ စဉ်းစားဖို့ပါ | ATK's Explicit Blog
from → Dicussion, For Men, For Women
← ဗေဒင် သွားမေးမိရာက အစော်ကား ခံလိုက်ရတဲ့ ကာယကံရှင် မိန်းကလေးရဲ့ စာ
Safe sex and … →
ရွယ်တူကိုမှ သွားချစ်နေတော့ဒီဆုံးမစာကို အပြည့်မယူတော့ဘူးနော်.. အသစ်အသစ်တွေလည်း အခုချိန်ထိ လုံးဝစိတ်မ၀င်စားသေးတော့ နောက်လူအတွက်ပဲ လက်ဆင့်ကမ်းပါတော့မယ်..း)
ဘ၀ဆိုတာ အခု အသက်တိုင်း ရပ်ထားလို့ ရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ နောက် အနှစ် ၃၀ ကို စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် မိန်းမကြီးတွေကို လိုက်ကြည့်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်နိုင်သေးသလား စဉ်းစားပေါ့။ ရှင်းနေတာပဲလေ။
ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် ဘယ်အသက်အရွယ်က အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ ခင်ဗျာ
စီးပွားရေး ပညာရေးဘာညာ အစစ အဆင်ပြေမှ အိမ်ထောင်ပြုသင့်သလား..ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပီးမှပဲ ပညာရေး စီးပွားရေးကို အခြေခိုင်အောင်ဆက်လုပ်သင့်သလား…အကြံပြုပါအုံး ဆရာ
ဘာပြုလို့ အိမ်ထောင်ပြုချင်တာလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို ကိုယ့်ဘာသာ အရင်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မျိုးဆက်အတွက်လို့တော့ မဖြေစေချင်ပါဘူး။ မျိုးဆက် ဘာညာ အကြီးကြီးတွေ ပြောသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပထမဆုံး စဉ်းစားသင့်တာက ကိုယ့်နှစ်ဖက် အဘိုးအဘွားရဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ သူတို့ရဲ့ အဘိုး၊ အဘွား နာမည်တွေတောင် ကိုယ်သိလို့လားဆိုတာပါ။ ကိုယ်တောင် ဘယ်မျိုးဆက်က ဆင်းသက်မှန်း မသိဘဲနဲ့ မျိုးဆက်ကိုတော့ အကြောင်း မပြသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်သွားရင် ကျန်တဲ့အဖြေတွေ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာကတော့ ဘ၀မှာ တစ်ယောက်တည်း တစ်သက်လုံး မနေချင်လို့ပါ ခင်ဗျား။)
ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ။ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မိသားစုခမျာလည်း နွေးထွေးဖို့ထက် စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပွေလီနေမှာ ၉၅ % သေချာနေမှာကို… သေချာ စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဆရာပြောတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်.. ဘက်ပေါင်းစုံကကြည့်ရင် ရေရှည် မလွယ်ပါဘူး.. ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာ မပါတဲ့အချက်တစ်ခု သတိရလို့ပါဆရာ.. အသက်အရွယ် ၉နှစ်ကွာတာနဲ့အမျှ အတွေးအခေါ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ စဉ်းစားဆင်ချင်တာနဲ့ လုပ်ကိုင်မှုတွေဟာ တော်တော်ကွာပါလိမ့်မယ်.. ချစ်ကြခင်ကြတုန်းမို့ အသွင်မတူတာပြဿနာမရှိသေးပေမယ့် အိမ်ထောင်ကြပြီးရင် ပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်.. အဲတာကိုလဲထည့်တွက်ရပါမယ်..နောက်ပြီးတော့ အရွယ်ငယ်တဲ့ယောက်ကျားလေးကို အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းမက နေရာတကစိတ်မချတာ စိတ်ပူတာ ချုပ်ခြယ်တာမျိုးလဲရှိလာနိုင်ပါတယ်.. ကောင်းတာကတော့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တာမဟုတ်ရင် ရွယ်တူလောက်ပဲသင့်တော်တယ်လို့ထင်ပါတယ်….
Little Poet permalink
ဆရာရေ… ကျွန်တော် ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ထက် လပိုင်းလောက် အသက်ကြီးနေတယ်ဗျာ…။
ဆရာရေ…ဆရာပြောတာကို ကြိုက်တယ်ဗျို့ …
တယောက်ထဲမနေချင်လို့ တဲ့ ….ဟီးဟီး…
ချစ်တာတွေ မေတ္တာတွေက အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ သေချာလို့ နေမှာပါ…:))
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့တင် ၁၆/ ၁၇ လေးတွေက အသီးသီးယူနေကြတော့ ဘယ်အရွယ်လောက် အိမ်ထောင်ပြုတာ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိချင်လို့ ပါ…
ကျွန်တော်ကတော့ စီးပွားရေး ပညာရေးပြည့်စုံမှ အိမ်ထောင်ရေးကို သွားတာကိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျာ…အခုတောင် ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ်ကို ဘီးဂျဲ (ဘဲကြီး) တွေလို့ ခေါ်နေကြတော့ …..ကျွန်တော်တွေးတာများမှားနေသလားလို့ ပါ…
ွှ့Thwin Aung permalink
ဆရာရေ ဘယ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က ပြောသွားခဲ့တဲ့စကားတော့မသိဘူး ကျနော်ကြားသိခဲ့ရတယ် အဲဒါက (Love is Sex) တဲ့….ဟီးဟီး တကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင် မှန်နေတယ်လို့ကျနော်ယူဆလိုက်ရပါတယ်…..
ဆရာရေ ဒီနေရာမှာတော့ ဆရာနဲ့ ကျွန်တော် အမြင်မတူဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေ ဆရာဆွေးနွေးသွားတာ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဆရာ့အနေနဲ့ အချစ်နဲ့သံယောဇဉ်ကို လျှော့တွက်ထားသလားလို့ပါ
ရပါတယ် သဘောမတူပါနဲ့။ အချစ်နဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာ အလုံးလား၊ အပြားလား ကျွန်တော် မသိဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်သိတာကတော့ ဘယ်ဟာမှ မမြဲဘဲ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ လူ့သဘာဝပဲ။ အထူးသဖြင့် ဖို-မ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ယောက်ျားတွေရဲ့ စိတ်သဘာဝထဲက အနိစ္စက ဘယ်လောက်မှ ကြာကြာမခံပါဘူးဗျာ။ အချစ်နဲ့သံယောဇဉ်ကို ယောက်ျားတွေသာ တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်လေ… ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… အားတော့ နာပါရဲ့… ခါရာအိုခေဆိုင်တွေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေ၊ ဇိမ်ခန်းတွေ၊ မိန်းမရွှင်လို့ ခေါ်တဲ့ လိင်အလုပ်သမတွေ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း ပေါ်လာမှာ မဟုတ်တာတော့ အင်မတန် သေချာလှတဲ့ အချက်ပါပဲ ခင်ဗျား။ 🙂
တွေးမြင်ယူဆချက်တွေအားလုံး သဘောကျတယ်…လက်ခံတယ်…ကိုစိုင်းပြောတဲ့ အချစ်နဲ့သံယောဇဉ် ဆိုတာ မယူခင်ကာလပါပဲ…..မယူခင်က ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်ထက်မနည်း
ပြောကြမှာပါ…ယူပြီးရင် တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ပြောဖို့တောင် သတိမရတတ်ကြပါဘူး..ယောက်ကျား မိန်းမ အတူတူပါပဲ…သံယောဇဉ်ဆိုတာကတော့ အရင်းနှီးဆုံး လူတစ်ယောက် ရဲဘော်ရဲဘက် တစ်ယောက် ဆိုတဲ့
စိတ်ပါပဲ….သံယောဇဉ်ကြီးတယ် ချစ်တယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ ဆရာပြောသလို ဘလာ ဘလာတွေ ပေါ်စရာ အကြောင်းမရှိ သလို လူညွန့်တုံးတဲ့ ရောဂါတွေလည်း ပေါ်မလာနိုင်ပါဘူး…မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ AIDS ပြန့်ပွားနှုံး
ကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ချစ်ခြင်းတွေ သံယောဇဉ်ဆိုတာတွေကို မြင်သာလာပါလိမ့်မယ်…မေတ္တာ သစ္စာ ဆိုတာလည်း ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရွှေမန်းတင်မောင် ဇာတ်သဘင်မှာတောင် မကြားရတော့ပါဘူး…:)
Khine Zar Win permalink
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတော့ ဆရာရဲ့ သားဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းမယ်။
သမီးဆိုရင်တော့ မတိုက်တွန်းဘူး ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ ပြန်ပြန်ကြားနေတယ်..
Single နဲ့ Married ဘယ်သင်းကို ရွေးချယ်ရမလဲ ဆိုတာ.. ယခုထက်ထိ ဦးနှောက်ခြောက်ဆဲ??
တီချယ်တစ်ယောက်ကတော့ None ဆိုပဲ…
ခိုင်ဇာဝင်းရေ–ကြိုက်တာကိုရွေးပါ။ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲ။ ဒါကတော့မိန်းမလုပ်မယ့်သူရဲ့တာဝန်၊ ဒါကတော့ယောက်ျား လုပ်မယ့်လူရဲ့တာဝန် စသဖြင့် မဖြစ်မနေယူရမယ့်တာဝန်ကြီးတွေ ပုံစံနဲ့ ဘောင်ခတ်လာမယ့်Marriage မျိုးဆိုရင်တော့မရွေးချယ်သင့်ဘူး။ ဥပမာဆိုပါတော့ မိန်းမဆိုရင် ထမင်းချက်ကိုချက်ရမယ်၊ အဝတ်လျှော်ကိုလျှော်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ဒီတာဝန်ကိုယောက်ျားလဲ
လုပ်လို့ရတာပဲ။ စိတ်ပါရင်ချက်ပါ၊မချက်ရင်လည်း စိတ်မဆိုးဘူး၊ အကိုချက်လိုက်မယ်လေဆိုတဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းမျိုးကို တွေ့ရင်တော့လက်ထပ်သင့်ပါတယ်။ သဘာဝတရားအရ သားသမီးမွေးပေး ရတဲ့တာဝန်မျိုးကိုတော့ မိန်းကလေးကယူရမှာပေါ့။မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ခင်ပွန်းသည်က ဝင်ငွေ ပိုရှာရမှာပေါ့။ ကျန်တဲ့တာဝန်တွေကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ကျေကျေနပ်နပ်ယူချင်တဲ့ တာဝန်မျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်းညှိနှိုင်းလို့ရမယ်။ ဘဝသက်တမ်းတိုတိုလေးထဲမှာ တစ်ယောက်ထည်းလဲ အထီးကျန်ကျန် မနေချင်ဘူးဆိုရင် Single ဘဝနဲ့ဘာလုပ်နေမှာလဲ။ လက်ထပ်သင့် ပါတယ်။ လက်ထပ်တဲ့လူတွေက ပိုမိုပျော်ရွှင်သက်ရှည်ကြတယ်တဲ့။ ပျိုလေးရည်းစား မောင့်စိတ်ထားကိုတော့ လက်မထပ်ခင်မှာ စိတ်ပေါင်းကိုယ်ခွါပြီးသေသေချာချာ အကဲခတ်သင့်ပါတယ်။
That is personal perception, as the explanation is based on the sex life only and I don’t think it’s correct for an answer not to marry her. Nothing wrong with the age difference as long as they are happy in their life.
Again, women will generally become reduced libido after the menopause due to the hormone changes.
သန့် သန့်permalink
ဆရာရေ ………… မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလေ အပျိုစစ်လားမစစ်လား လမ်းလျှောက်တာကြည့်ရုံနဲ့ 
သိတယ်ဆို အဲ့ ဒါမှန်လားဆရာ တကယ်သိနိုင်လား ဆိုလိုတာက သူ ရဲ့ တင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ နဲနဲလောက် အကြံပြုပါဦး
ရေးချက်ကြီးက9လောက်ရှိတယ်။
kg ma lay permalink
ညမချစ်သူက ညမထက် ဆယ်နှစ်လောက်ကြိးနေတယ် အဲလိုဆိုရင်ကော
(၁) စာဖတ်ပါ (၂) စာဖတ်ပါ (၃) စာဖတ်ပါ
ဒါတွေ ကျွန်ုပ်အကုန်ရေးပြီးသားပါ။ ရှာဖွေဖတ်ရှုကြည့်တော်မူ။
ဒါနဲ့ ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမ အသက်ဘယ်လောက် ကွာရင် အသင့်တောာ်ဆုံးပါလဲ ဆရာ။
ဟိုတစ်ယောက်ကို ဖြေတဲ့အတိုင်းပဲ ဖြေပါရစေ။
tay za myo permalink
ကျွန်တော် မှာချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်…နိုင်ငံခြားမှာ ဆိုတော. livingtogether တော.ရှိတာပေါ.
သာမန် မိန်းကလေးတွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆိုရင် သူတို.ရဲ.ဆန္ဒ`ပြည်.ဝတတ်ပါသလဲ….
အခုကျွန်တော်. ကောင်မလေးက ၃ ….၄ ကြိမ် ထိကို သူ.ဆန္ဒမပြည်.ဘူး ဆရာ….
အဲ ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ….
လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတာမို့လို့ ပုံသေနည်း ထုတ်လို့ မရပါဘူး။ ၃-၄ ကြိမ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဘက်က ၃-၄ ကြိမ်ကို ပြောတာလား။ သူ့ဘက်က အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်တဲ့ ၃-၄ကြိမ်ကို ပြောတာလား မရှင်းပါဘူး။ သူ့ဘက်က ၃-၄ ကြိမ် တကယ် ထိထိရောက်ရောက် အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်လျက်သားနဲ့ ဆန္ဒ မပြည့်ဝဘူးဆိုရင်တော့ ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်ရပ်လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ၃-၄ ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ညံ့တာလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါခင်ဗျား။
Kyi Phyu permalink
ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး အဲဒါဆို အချစ်မှာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့စကားကျတော့ကော အဲဒါ က တဏှာပဲ လူတိုင်းက တဏှာနဲ့မကင်းနိုင်တာ မှန်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ လွန်နေတာက အသက်အရွယ်တဲ့.. အဲဒီအသက်အရွယ်ကြီးကွာတာနဲ့ ပဲ လက်ထပ်ဖို့ အားမပေးဘူးဆိုတာတော့ လွန်လွန်းပါတယ် ..စကားတစ်ခုကြားဖူးတယ်.. အမှည့်လွန်တဲ့သရက်စေ့ ပိုစုတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုလားပဲ =) ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ချစ်သူကိုပဲချစ်တယ်… တဏှာထက် အချစ်က အဓိကလို့ ထင်တယ်… အချစ်ရှိနေရင် ပျိုတာတွေ အိုတာတွေ ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့ဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလားဗျာ
အပေါ်က ကိုစိုင်းဆိုသူ ပေးထားတဲ့ comment အောက်မှာ ဒါကို ရှင်းပြီးသားပဲလေ။ စာကိုသာမက comment တွေပါ စုံအောင် ဖတ်ပြီးမှ comment ရေးမယ်ဆိုရင် သိပ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းနေမှာ အမှန်ပဲခင်ဗျ။ ၀မ်းနည်းပါတယ်။
ဖိုမ ကိစ္စကို ဆေးနွေးပေးတာကောင်းပါတယ်
ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ် ဗဟုသုတတွေလဲရပါတယ် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိရတဲ့အတွက်အရမ်းကောင်းတာပေါ့ဗျာ
ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာကို ထမင်းစားရေသောက် သမရိုးကျ ကိစ္စလို ရေးပြတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဖိုမကိစ္စကို ဆွေးနွေးတာကောင်းတယ်
လူမှုရေးဖောက်ပြန်ကို ဘာမှမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ ရေးပြတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်ဗျာ
သောက်ကျိုးနည်း… ပုဒ်မကြီးက ကြီးလှချေလား။ “အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာ” “လူမှုရေး ဖောက်ပြန်တာ”ဆိုတဲ့ အလုံးကြီးတွေကြောင့် လိပ်ပြာတောင် စင်မတတ်ဖြစ်သွားပြီး ကိုယ့်စာကိုယ် မနည်း ပြန်ဖတ်ရတယ်။ ငါ ဘာများ ရေးမိလို့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့။ “အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာ” “လူမှုရေး ဖောက်ပြန်တာ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက ကျား-မ နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ကျွန်တော့်စာထဲမှာ ပါနေတာက ယောက်ျားတွေရဲ့ လိင်စိတ်နဲ့ မရောင့်ရဲနိုင်မှုကို အဓိက ထားပြောတာ။ သည်အတွက်ကြောင့် ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ “ထမင်းစားရေသောက်”လို၊ “သမရိုးကျ” ဖောက်ပြန်တယ်။ ၀န်ခံသူနဲ့ ၀န်မခံသူပဲ ရှိမယ်။ ယောက်ျားအများစုဟာ သူ့နည်းနဲ့သူ ဖောက်ပြန်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကို ရေးထားတယ်။ ကျွန်တော် ဖောက်ပြန်ခဲ့ဖူးတာကိုလည်း သည်အချက်ကို လေးနက်စေချင်လို့ ထည့်ရေးထားတယ်။ ဒါကို စောစောက စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ စွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ကပဲ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာကို အားပေးနေသယောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ခုတ်ရာ တခြား၊ ရှရာတလွဲပဲ။
(၁) ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့် သည်စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်တာပါလဲ။
(၂) ဘယ်လိုမျိုး ရေးစေချင်ပါသလဲ။
(၃) ထမင်းစားရေသောက် သမရိုးကျ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျား တွေက အနည်းစုမို့ ကိုယ့်နှမ သူ့နှမ အားလုံးကို ယောက်ျားမှန်သမျှကို တစ်ဘ၀လုံး ပုံပြီး ယုံစေချင်တာပါလား။
(၄) သည်လို ကိုယ်တိုင် ဖောက်ပြန်တာကို ဖွင့်မရေးဘဲ လူအထင်ကြီးအောင် ကြောင်သူတော် လုပ်ပြစေချင်တာပါလား။
(၅) အမှန်တရားကို ဖုံးဖိထားတဲ့ လောက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထောက်ခံအားပေးချင်တာပါလား။
အဲဒီ့မေးခွန်းတွေကို Biker ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းက ပြန်ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ အဲဒီ့ ငါးခုစလုံး ပြန်ဖြေပေးပြီးရင် နောက်တစ်နေရာမှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း ကျွန်တော် ဖြေပေးပါ့မယ်။
၁။ ကိုင်ပေါက်တယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးဆရာ
ကျွန်တော်နားလည်ထားတာက အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ တရားဝင်လက်မထပ်ထားတဲ့သူနဲ့ ဆက်ဆံတာကို ဆိုလိုတာပါ။ နှစ်ဘက် သဘောတူရင် မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဒါမျိုးကို နှာခေါင်းရှုံ့ပါတယ်။ လက်မခံပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို မကြားဘူး မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေ မလုပ်အပ်မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ သိထားတဲ့သူတွေက ဒါကို သမရိုးကျကိစ္စပဲ။ လူ့သဘာဝပဲလို့ ထင်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ၀င်ရေးတာပါ။
ဆရာ့ကို မလေးမစားလုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒမပါပါဘူး။
၂။ “အမှန်ကို ၀န်ခံရရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၁၈ နှစ်ငယ်သူ တစ်ဦးလည်း ပါပါတယ်။ ”
ဥပမာ ဆရာနဲ့ ဆရာ့ဇနီး ၊ ဆရာ့ သူငယ်ချင်းလင်မယား၊ စသဖြင့်ပေါ့ တတ်နိုင်သရွှေ့ပေါ့ အစားထိုး ရေးစေချင်ပါတယ်။ ဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေက ခဏခဏ တွေ့နေရလို့ပါ။
၁၈နှစ်ကွာတာကိုရေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာတို့လင်မယားမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဦးလေးရဲ့ နောက်မိန်းမဆိုတာလဲရေးလို့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဆရာ့ဘက်မှာလဲ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းတရားဖြစ်စေဖို့ သက်သေပြဖို့အတွက် ကိုယ်တွေ့ ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေချင်တဲ့ အကြောင်းလဲရှိဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်သဘောကတော့ အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုသလိုမသိသေးမတတ်သေးတဲ့သူတွေ အတတ်သင်ယူမိမှာစိုးလို့ အတု မမြင်စေချင်တဲ့သဘောပါ။
နံပါတ် ၃။ ၄။ ၅။ က ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
ဖြေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးစရာတွေက ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
ဂျာအေးကတော့ သူ့အမေကို လှိမ့်ရိုက်နေပါပြီ။ “မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဒါမျိုးကို နှာခေါင်းရှုံ့ပါတယ်။ လက်မခံပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို မကြားဘူး မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေ မလုပ်အပ်မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ သိထားတဲ့သူတွေက ဒါကို သမရိုးကျကိစ္စပဲ။ လူ့သဘာဝပဲလို့ ထင်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ၀င်ရေးတာပါ”ဆိုတဲ့စကား… ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ ဒါဖြင့် မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မယားငယ်နေတဲ့သူတွေ မရှိလို့လား၊ မင်းတုန်းမင်းအပါအ၀င် ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာ ရှင်ဘုရင်တွေကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့ကြဖူးပါသလား။
(၁) ယောက်ျားတွေ မယားငယ်နေတာ၊ အမြှောင်မယား ယူတာ၊ မိန်းမရွှင်ဆီသွားတာ၊ အနှိပ်ခန်း၊ ခါရာအိုခေခန်းသွားနေတာ၊ မကြားဘူး မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေများ ရှိပါသလဲ။
(၂) မလုပ်အပ် မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ ဥပဒေထဲမှာ ပါပါသလား။ (ဘာသာတရားနဲ့တော့ ကိုင်မပေါက်ကြေးပေါ့နော်။ ဘယ်ဘာသာတရားမှာဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာ ညွန်ထားတာချည်းပေမယ့် မတစ်ရာသားတွေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အဲဒီ့ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေအတိုင်း မနေကြဘဲ လူတွေလို နေနေကြလို့ စစ်တွေဖြစ်၊ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်နေရတာ လူ့သမိုင်း အစကတည်းကမို့ပါ။)
၃၊ ၄၊ ၅ က လူကြီးမင်းရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… ကျွန်တော် ဒါတွေ ရေးနေတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲဒီ့ ၃-၄-၅ ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာမှ နံပါတ် ၄ နဲ့ ၅ က ပိုအဓိကကျပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြောင်သူတော်တွေကို သိပ်မုန်းပါတယ်။ အမှန်တရားကို ဖုံးဖိထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာ နေခဲ့ရတာလည်း ကျွန်တော့်တစ်သက် ၅၄ နှစ် ရှိပြီမို့ မွန်းလှကြပ်လှပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဒါတွေကို ရေးတာပါ။ အချစ်ဆိုတာကို ကိုးကွယ် ယုံစားပြီး ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်နေတဲ့ မိန်းမတွေလည်း ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ပေါလှပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ၃ အချက်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
၃-၄-၅ ဟာ လူကြီးမင်း မူလရေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်သည့်တိုင် လူကြီးမင်းရဲ့ “အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုသလိုမသိသေးမတတ်သေးတဲ့သူတွေ အတတ်သင်ယူမိမှာစိုးလို့ အတု မမြင်စေချင်တဲ့သဘော” မရောက်အောင် ထိန်ချန်ပေးပါလို့ ဆိုလိုရာ ရောက်ပါတယ်။ ၃-၄-၅ကို မလုပ်ဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖြေဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ စာဖတ်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီး ကူညီပေးချင်တဲ့ စေတနာတွေ တဖြည်းဖြည်း ခမ်းခြောက်စ ပြုလာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အခုလို ကွန်မန့်မျိုးတွေက အရမ်း အကူအညီပေးနေတာပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆ၇ာပြောတာလက်ခံပါတယ် မင်းတုန်းမင်းဆို စုဖု၇ားလတ်ကွယ်၇ာမှာကဲချင်တာနဲ့
မင်းတုန်းမင်းက ကွယ်ရာမှာကဲဖို့ စုဖုရားလတ်က ဆိုတော့ လွဲနေသလိုပဲ o.O
သီပေါမင်း နဲ့ စုဖုရားလတ်ကို ပြောချင်တာနေမယ် 😀
Ju Ju permalink
မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မယားငယ်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် မငယ်တဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်
အဘယ်အချိုးအစားက ပိုများတယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကြီးပြင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မတည်ပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တွေ့ရသလောက်တော့ မြို့ကြီးတွေက လွဲရင် ကျန်တဲ့ နယ်မြို့တွေရဲ့ လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ အမှုကို အင်မတန်စက်ဆုပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူ ဖောက်ပြန်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်လဲ ပတ်ဝန်းကျင်က အထင်သေးတာ၊ ၀ိုင်းကျဉ်တာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိမ်ငယ်နေရတာ တွေရှိပါတယ်။ တချို့ ဆိုရင် လူမှုရေးဖောက်ပြန်တော့ လူမှုရေးတင်မကပဲ စီးပွားရေးပါ ပျက်စီးသွားတယ်။ သူတို့ အမှားအတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ အရှက်ရရသလို သူတို့ မိသားစု အထူးသဖြင့် သားသမီးတွေမှာလဲ ထိခိုက်မှုအနည်းနဲ့ အများ ရှိနေပါတယ်၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်လို့မရတဲ့ နောက်ဆုံး စိတ်ဓာတ်တွေအကြီးအကျယ်ကျပြီး ဘ၀ကိုပါ အရှုံးပေးရင် အသက်ပါ အသေခံသွားကြတာမျိုးတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စာတွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတွေ့ပါ။ ကျွန်တော့်ရှေ့တင် (၂)ယောက်လောက် မြင်ဘူးပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတွေပါ။ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ဒီလိုအမှုကို ကျူးလွန်တဲ့ အတွက် အကျိုးဆက် ဒီထက်ပိုဆိုးပါတယ်။ ရေးမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါ။
ရှေးခေတ်က ဘုရင်တွေကို နှာခေါင်းရှုံ့မရှုံ့ မသိပေမယ့် ယခုခေတ် မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ရှုံ့မရှုံ့ ကျွန်တော်သိသလောက် ရေးပြထားတာပါ။
၁။ သွားနေကြပါတယ်။ ကြားလဲ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို မကောင်းဘူးလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံထားသေးတဲ့အတွက် ခိုးလုပ်တဲ့ သူတွေပဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ပေါ်တင်လုပ်တဲ့သူတော့ မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ မိန်းမရေ ငါတော့ အငယ်လေးဆီက ငါ ခုမှပြန်လာတာ ကောင်မလေးက သိပ်လန်းတာပဲ။ မင်းနဲ့တော့ကွာပလို့ မကြားဖူးပါဘူး။
ကိုယ်နဲ့ တရားဝင်လက်ထပ်ထားတယ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့သူနဲ့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ပေါ်တင်ပြောရဲတဲ့ ခေတ်မရောက်သေးပါဘူး။ ထမင်းစားရေသောက် သမရိုးကျ ကိစ္စမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပေါ်တင်ပြောလို့မရသေးတဲ့ အချိန်နဲ့ ပြောလို့ ရပြီး ဘာမှ မထူးဆန်းတော့တဲ့ အချိန်နဲ့ ဘယ် အချိန်မှာ ဒီလိုကိစ္စတွေ ဖြစ်တာက ပိုများမလဲ ဆရာ။ အခုဒီကိစ္စကို ဆရာက စပြီး ပေါ်တင်စပြောနေပါပြီ။
ဥပမာပြောရရင် အခု ကျွန်တော်တို့ ပေါ်တင်လူသတ်လို့မရပါဘူးဆရာ။ ပေါ်တင်လူသတ်လို့ရတဲ့ စစ်ဖြစ်တဲ့ အချိန် နဲ့ မုန်းလို့ သတ်ချင်ရင်တောင် ခိုးသတ်ရတဲ့ အခုလိုအချိန်နဲ့ ဘယ်ဟာက လူအသေအပျောက်ပိုများမလဲဆရာ။
ဆရာ့ထက်စောပြီး ဒါမျိုးကို မရှက်မကြောက်ပြောတဲ့သူ တစ်ယောက်တော့ ရှိပါတယ်။ ဦးနုပါ။
ကာမတဏှာစာအုပ်ထဲမှာ သူ ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရေးပုံက မှားခဲ့တယ် သံဝေဂ ရလို့ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ။
အသိပညာပေးချင်တဲ့စိတ် ရှောင်သင့်တာရှောင်ဖို့ သိစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဆရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗီလိန်ဝင်လုပ်ပြီး ပညာပေးတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဆရာဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ရေးလို့ရပါတယ်။ ထိန်ချန်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့အခါမှာ ငါဖောက်ပြန်မိလို့ လူမှုရေးအရ ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ စီးပွားရေးအရဘယ်လိုဆုံးရှုံးခဲ့တာ ကျန်းမာရေးအရ ဘယ်လို ထိခိုက်ခဲ့တာ တစ်ဘက်သားမှာဖြင့် ဘယ်လိုနစ်နာခဲ့တာ ဘယ်လိုဒုက္ခသုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာ စသဖြင့် ဒါမိုးကို ပိုပိုသာသာ ရေးတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် ၁၈နှစ်ငယ်တဲ့သူကို စွဲလန်းတဲ့ကိစ္စမှာတော့ တခြားလို ရှောင်ရေးရင်တော့ ပိုသင့်လျှော်မယ်ထင်လို့ အပြုသဘောနဲ့ အကြံပေးတာပါ။
ဒီလို မျိုး မမေးသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
(၂) မလုပ်အပ် မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ ဥပဒေထဲမှာ ပါပါသလား။
လို့မေးထားတာက လုပ်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်က ရပ်တည်ထားသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
မိန်းကလေးတွေကို ရှောင်ဆိုပေမယ့် ယောက်ျားလေးတွေကို ဆောင်စေချင်တဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်နေပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်နေတဲ့ မိန်းမတွေကိုနည်းပါးစေချင်တာမျိုးဆိုရင် တစ်ဘက်က အမျိုးသမီးတွေကို ရအောင်ရှောင်ပြေးဖို့ ပညာပေးသလို အမျိုးသားတွေကိုလည်း မလိုက်ဖို့ ပညာပေးရမှာပါ။
၂။ မလုပ်အပ်ဘူး မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတာမရှိပေမယ့် လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဥပဒေထဲမှာတော့ လိမ်ညာပြီး ကာမရယူမှုလို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဂျူးရဲ့ သူမင်းကို ဘယ်တော့မှ ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ အဲဒါမျိုးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အမှုချတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒါကလဲ အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူပါဘူး တချို့ကျတော့လဲ ချစ်တယ်ပြောစရာမလိုအောင်ကို လွယ်လွန်းတာတွေလဲ ရှိမှာပါ။ ဥပဒေကိုလဲ မသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေထဲပါမပါ အတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။
ဟိုတစ်ခုက ကျန်တဲ့ ၃။၄။၅။ က ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကွန်မင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုံးဝကို မသက်ဆိုင်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဆက်ဖြေပေးပါမယ်။
မသိလို့ မေးတဲ့မေးခွန်း၊ မေးသူကိုယ်တိုင်က ဖြေချင်လို့ မေးတဲ့မေးခွန်း၊ စသဖြင့် ရှိတဲ့အထဲမှာ
မိမိ အလိုကို လိုက်စေချင်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
၃။ မယုံစေချင်ပါဘူး။ သို့သော်လဲ ချွင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
၄။ကြောင်သူတော်လုပ်မလုပ်က ဆရာ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။
၅။ အမှန်တရားတွေကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လောကကိုအားမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖော်တိုင်းလဲ မကောင်းပါဘူး။ အဖြေ တိတိကျကျ ဖြေဖို့ မသင့်တဲ့မေးခွန်းမျိုးပါ။
ဆရာနဲ့ ကျွန်တော်က အသက် ၃၀တိတိ ကွာတဲ့အတွက် အမြင်ချင်းကွဲပြားနေနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေကသူတို့ တစ်သက်တာတာမှကြုံတွေ့ ရတာတွေ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုတွေကြောင့်လောကကြီးကိုအကောင်းမမြင်တာများတယ်တဲ့ ကိုယ်ကငယ်တဲ့လူပဲလျှော့ပေးလိုက်ပါ
သေချာတာကတော့ အွန်လိုင်းပေါ် မရောက်ခင် မဂဇင်းမှာတည်းက ကျွန်တော်က ဆရာ့ ပရိတ်သတ်ပါ။
စာအုပ်မှားသွားပါတယ် ဦးနုရဲ့ ငရဲဆိုချိုနဲ့လားထဲမှာပါ။
Ko Nyi Pu permalink
ဆရာ ဘာကြောင့် ဆက်မရှင်းတော့တာလဲ ..အွန်လိုင်းမလာဖြစ်တာလား ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖတ်ရင်း ဆရာတို့နှစ်ယောက်ရှင်းနေတာကို စိတ်ဝင်းစားလို့ လိုက်ဖတ်နေဖြစ်တယ် ကို biker က ၃.၁၀.၂၀၁၁ ရက်နေ့မှာကတည်းက နောက်ဆုံးရေးထားတယ် ဒီနေ့ ၇ ရက် ရှိနေပြီဆိုတော့ ဆရာမအားဘူးထင်တယ်…
ဟုတ်တယ်ဗျာ.. ဆရာနဲ့ ကို Biker ဆက်ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ချင်တယ်..ဗျ..နဲနဲကြာသွားသလားလို့..ပါ..
ဆရာရေ.. ဆက်နွေးပါ.. အခုမှ ဒီမှာ လာဖတ်ဖြစ်တာပါ.. တွေ့တွေ့ချင်ပို့က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေလို့.. နောက်နေ့တွေ လာဖတ်ပါဦးမ်..
ဆရာအတ် နည်းနည်း ဖု သွားပုံပဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အသက် ၃၀ တိတိ ဆိုတာကြီးကြောင့်များလား ?
တကယ် ကို စာ အရေးအသား နဲ့ အပြောအဆို ပါ ကောင်းတဲ့ လူ နှစ်ယောက် ပါ။ ခုလို ပညာရှိ နှစ်ယောက် ဆွေးနွေး မှူ ကိုဖတ် ရတာ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်
ဘာပဲပြောပြော….လူတွေ (ငါးပါးသီလမှအစ) ကိုယ်ကျင့်သီလ မစောင့်ထိန်း ကြလို့ပါ။
ဗဟုသုတရ တဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။။
i don’t have experience for comment. but i also want to continue you and bike discussion. but why you don’t reply. busy or ?
အသက်(၃၀) ကွာတာက အဓီက လို့ မထင်ပါဘူး..ဘာလို့ ဆက်မပြောတာလဲ ဆိုတာ..ရှင်းသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်….
ဆရာနဲ့ Biker နဲ့ ဆွေးနွေးတာကောင်းပါတယ်…. တစ်ယောက်အမြင်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်၊ ခံယူမှုတွေကွဲနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်…. ကျနော် အမြင် က တော့ ဥပမာပေါ့- ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်တက်ကျ ရင်… အောက်ကိုပြန်ကြည့်ကြတဲ့အခါ… နေရာပေါ်မူတည်ပြီး.. အမြင်တွေကွဲကြတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်… အပေါ်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့သူ… ကတော့ အားလုံးနီးပါးကို ချုံမြင်နိုင်မှာပေါ့…. အလယ်လောက်ရောက်နေသူကတော့… အဲ့ဒီကနေမြင်မိတဲ့အမြင်ပေါ့(ဘယ်သူက ပိုတော်လို့ ဘယ်သူကပိုသိလို့ ဆိုတဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူးနော်၊ ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ရင်၊ ကိုယ်အမြင် သူ့ဘက်ကကြည့်ရင် သူ့အမြင်ကိုပြောချင်တာပါ)… ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်ထင်မြင်မိတယ်… နေရာတစ်ခုကို ရောက်မှသာ… ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း တွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်ပြောကြရတာပါ… ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံ အကောင်းဆုံး အသိပညာလို့ယူဆ မိလို့ပါ….
ဆရာပေးချင်တဲ့ message နဲ့ Biker ရဲ့ အမြင် နဲ့ ကလွဲ နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်…. ကျနော် ကတော့ သိလို့တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး… ကျနော်မြင်မိတဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြတာပါ… ပြီးတော့… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ပြီးပြောဆိုနေကြ ရင် .. ပြီးဆုံးနိုင်မယ်မဟုတ်ဖူး လို့လဲ ထင်မြင်မိပါတယ်… လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြတဲ့သဘောပါ… နှစ်ဖက်လုံး မှာ စေတနာအပြည့်ပါပါတယ်…. အဲ့ဒီအတွက်ယူသင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲ.. ယူသင့်တာကို ယူကြရမှာပါ…
အမှန်ပါပဲ Agree to disagree လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်။ အဲ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိ အမြင်တွေ ခံယူချက်တွေ၊ အလေးပေးမှုတွေ နာလည်ထားတာတွေဟာ အချိန်နဲ့ အမျှ အတွေ့ ကြုံနဲ့ တစ်ကွ ပြောင်းလဲလာနေပါတယ်။အဲဒါကိုလည်းသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်ခံယုံကြည်ခံထားခဲ့တဲ့ ယူဆချက်တစ်ခုဟာ မှားခဲပါလား၊ အမှန်ဆို တာတခြားတစ်ခုပါလား လို့ သိလာတဲ့အချိန်မှာသာ အမှားကိုစွန့် ပစ်ပြီး အမှန်ဘက်မှာရဲရဲဝင့်ဝင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်တာပါပဲ။ တော်တော်များများက ဒီနေရာမှာ အားနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “တွေ့ တယ်မို့ လား ငါမှန်တယ် လို့ သာ ပြောချင်ကြတာ ၊ ငါမှာခဲ့တယ်ကွလို့ ဝန်ခံဖို့ ခဲယဉ်းကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်ပြဆွေနွေးလိုတာက အကြောင်းရာတစ်ခုပေါ်မှာ ရှုထောင့်မတူတာလေးပါပဲ။
Biker ကတော့ လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တတ်ကျင့်ဝတ် ဘက်ကအသားပေးပြီး ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ ဆရာကတော့ မကောင်းမှုဘက်မှာသာ အများဆုံးပျော်မွေ့ တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ “့စိတ်” အဲဒီဘက်ကနေ ပြောသွားတာပါ။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် “ကျင့်ဝတ်” နဲ့ ”စိတ်”။ ဒီနှစ်ခုဟာ သဘောသဘာဝကိုကဆန့် ကျင်ဖက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ လိုက်နာသင့်တဲ့ကျင်ဝတ် စည်ကမ်းတွေကို မသိလို့ ထက်၊ မကျင့်ကြံ မလိုက်နာနိုင်လို့ ပြဿနာတွေ တက်နေရတာပါပဲ။
စာတစ်ခုကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ထက် စာရေးသူရဲ့ တင်ပြလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ထိုးထွင်းကြည့်မ်ိဖို့ လည်းလိုပါတယ်။
ဆရာ့ရဲ့စာတစ်ကြောင်းကို ထုတ်နှုတ်ပြရရင် “အမှန်ကို ၀န်ခံရရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၁၈ နှစ်ငယ်သူ တစ်ဦးလည်း ပါပါတယ်။” ဆို တဲ့စာကြောင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာကို ထမင်းစားရေသောက် သမရိုးကျ ကိစ္စလို ရေးပြ လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အတုယူအားကျစေဖို့ ရေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ “ကံသီလို့သာ ကျွန်တော် ဒုက္ခမတွေ့ရတာပါ။” တဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ကို အတုယူပြီး ရှောင်ရှားစေလို့ ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဆရာရဲ့အတွေအကြုံ ဆရာ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကို မရသေးမရောက်သေးပါဘူး။ကျွန်တော့အသက် (၂၁) နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ် (ကြော်ငြာတာပါ)။ သူ့ ကိုယ်တွေ့ ကို အရှိအတိုင်း ချပြလိုက်တာဟာလည်း “ငါတောင် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သေးတယ် မင်းတို့ လည်းဆင်ခြင်ကြကွ” လို့ ပြောချင်တာပါ။ “ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်မိစေနဲ့ ” ဆို တဲ့ သဘောမျိုးပါ။ သူများအဖြစ်အပျက်တွေကျတော့ ပြောဆိုဝေဖန်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတော့ ထိန်ချန်ထားလို့ ဘယ်သင့်မလဲဗျာ။ ဆရာ့ရဲ့ စာတွေကို ဆက်လက်အားပေးရတာလည်း ဒီလို ခပ်ဘွင်းဘွင်း ပြောဆို ထားလို့ ပါပဲ။ ဆွေးနွေးရေးသားရတဲ့ အကြောင်းအရာကို က အဲလို မရေးရင် မဖြစ်ဘူးကိုးဗျ။
ကဲအဲဒီတော့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ Biker ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာကိုလည်း ဆက်လက်ပြီးစာတွေရေးသားနိုင်ဖို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။
တစ်ကယ်တမ်းဆို ပြောဆို ဆွေးနွေးမှလည်း ပို ပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် နားလည်လာတာပါ။
ကျွန်မလည်း biker ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ထောက်ခံပါတယ်။
Myint Win permalink
ဆရာ့လို လူမျိုးတွေတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာပါစေ…ကျွန်တော်တိုင်းပြည်က ကြောင်သူတော်တွေများနေလို့
ကိုမြင့်ဝင်းရေ တိုင်းပြည်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ရွှေသွားတူးမှာ တူးစမ်းပါဗျာ။ ဘာ comment တွေလျှောက်ဝင်ရေးနေတာလဲ။
nyi nyi permalink
ညီညီ ကိုယ့်ကိုယ် ကို မေးကြည့်ပါလား။ ကြည့်မကောင်းတော့ရင် မချစ်တော့ဘူးလား ဆိုတာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျမထက်ငယ်သော ကောင်လေးပြောတာယုံတော့မလို့ပါ
ko biker ရေးတာရော ဆရာရေးတာရော ကောင်းပါတယ် ဒီဘလော့ကိုထောင်ပေးတဲ့ဆရာကိုလည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတိုင်းဦးနှောက်ရှိမယ်ထင်တာပဲ ဘယ်ဟာကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာကို
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားကြပါ ဆရာပြောသလိုခြွင်းချက်ဆိုတာရှိပါတယ် တစ်ချို့ခြွင်းချက်တွေကလည်း အမှန်တရားထက်ပိုမှန်တယ်ဆိုတာလည်း လက်မခံလို့မရပါဘူး ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့ချစ်တာလဲ ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားလဲ ကိုယ်နဲ့သဘောထားခြင်းရော တိုက်ဆိုင်ရဲ့လား တစ်ကယ်ချစ်တာလားဆိုတာပဲ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် အမှားပါရှုင်ခွင့်လွှတ်ပါ….
အမှန်တရားရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ဟာ အမှားမဟုတ်ပါဘူး… တစ်ခြားသော အမှန်တရားပါတဲ့…… ဆရားနဲ့ ကိုbikerတို့ ရေးထားတာတွေ ကောင်းကြပါတယ်….. ဆရာ ရေးထားသလို ယောက်ျားတွေရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်နေ၊ စိတ်ထား၊ သဘာဝ……. မိန်းမတို့ရဲ့ စိတ်နေ၊ စိတ်ထား၊ သဘာဝ…. သေချာစွာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်ထားကြမယ်ဆိုရင်…. နောင်ရေးကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်လို့…. မိမိတို့ တည်ဆောက်ထားပြီးသား အိမ်ထောင်ကလေး သာယာစွာ အဓွန့်ရှည် တည်တန့်နေအောင်…. ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလဲ ငါ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒီိလိုတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သိရှိထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်… သနားစရာ ကောင်းတဲ့ မိမိချစ်ဇနီးနဲ့ သားသမီးများလဲ ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်… အတတ်နိုင်ဆုံး မမှားသင့်တာ မမှားရအောင်… ကိုbiker ပြောသလို ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေလဲ မချိုးဖောက်မိအောင်… တရားထိုင်ခြင်း.. အားကစားလိုက်စားခြင်း…. အစုအပေါင်း လူမှုရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ခြင်းစသဖြင့် များစွာသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်အာရုံလွှဲပြောင်းမှုလေးတွေ တစ်ခုခုကို ပြုနေရမယ်… အမျိုးသမီးဖြစ်သူကလဲ ငါ့ယောက်ျား ဒီအရွယ်မှာ ဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ သိရှိသဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်…. ဘယ်လောက်အိမ်မှုကိစ္စတွေ များနေပါစေ…. ယောက်ျားအကြိုက်ကို အချိန်ပေးပြီး နေထိုင်ပြောဆိုပြုမူရမယ်… မိမိအိမ်ထောင်ဦး ညားခါစ ကဲ့သို့သော ခံစားမှုကိုမျိုးကို ပြန်မြင်ယောင် အောက်မိစေနိုင်အောင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြုပြင်ဖန်းတီးယူရမယ်…. ဘယ်လောက် အလုပ်များနေပါစေ…. ငါအိမ်ထောင်မိန်းမဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမသွင်းထားပဲ… မအိုတဲ့ အပျိုလေးလိုမျိုး.. မိမိကိုကို အတတ်နိုင် ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ရမယ်….. အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိအမျိုးသား အူတိုလာနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်……မိမိအိမ်ကိုရော မိမိနဲ့အတူတူ လှပနေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ဆင်ရမယ်……..မည်သည့်အခါမှ မိမိကို အိုသွားပြီလို့ ယောက်ျားအထင်ရောက်သွားစေအောင် မိမိယောက်ျားရှေ့မှာ အမယ်အိုတစ်ယောက် မနေမိစေရန် သတိထားရမယ်…… မိမိအမျိုးသားစည်းစည်းရုံးရုံးနှုင့် အိမ်မှာပျော်အောင် သားသမီးများကိုလဲ စည်းရုံးခိုင်းရမယ်……. ပျော်ရွင်ဖွယ်မိသားစုရဲ့ အနှစ်သာရကို အတူတူ ဖန်းတီးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်……. ဘယ်လောက် ပျော်ဖို့ ကောင်းလိုက်မလဲနော်…….အားလုံးပဲ လူမှုရေး ဒုက္ခတွေ ကင်းနိုင်သမျှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ……
how can i know ,virgin or not,i want to know by traditional (no biocally)?Saya if you haveatime please please answer me and i apologize you ,askingaquestion here ,saya ,
ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးထက် ၁၁ နှစ်ကြီးရင်ရော အဆင်ပြေပါ့မလား
ိငယ်တဲ့လူက လှေကားထောင်တက်ရမှာ မို့လို့လား။
ကို biker ရေ..အသက် ၅၀ ကျော်မှဆရာ နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရင် ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်လို့
အကြံပြုပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကို biker အနေနဲ့ အသက် ၅၀ ကျော် လူကြီးတယောက်ရဲ့
စိတ်ကို မခံစား တတ်သေးလို့ပါ။
နားလည်မှု နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာမှု က လူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ပါ
တဲ့ လူ.စိတ်လေးသဘောလေးပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးတဲ့နေရာမှာ……ယဉ်ကျေးမှု.၊ ရေမြေတောတောင်နဲ.လိုက်ပြီးတော့..ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ တစ်ဘက်ဘက်ကို ဖိအားပေးရာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်………အပေါ်က ကွန်.မက် တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ ဆက်ပြောစရာကို မလိုလောက်အောင်ပါပဲ။ ဒီဆိုက်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….မသိနားမလည်တဲ့
မေးခွန်းနှစ်ခု တွေ့ရပါတယ်… အရင်မေးတဲ့ မေးခွန်းကို မပြောလိုပေမယ့်… နောက်မေးတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်… အသက် 20 အရွယ်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ မေးခွန်းပါ… သေချာလားဆိုတဲ့ အမေးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချလိုက်သလိုပါပဲ……….. အဲလို မေးခွန်းမေးတဲ့အတွက်… အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
အင်း………ကျနော်ကတော ဒီပွဲမှာ ဆရာလုပ်သူ ရှုံးတယ်လို့ သဘောရပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည် ဝံခံခြင်းတဲဗျ။ ဆရာ သဘောတူလို့ ထပ်မရေးတာလို့ ထင်ပါတယ်။ စကားအရာမှာလဲ တစ်လုံးချင်းစစ်ရင်တောင် အသက်ကြီးတဲ ဆရာက ပိုရိုင်းပါတယ်။ ဟိုလူက အသက်တာငယ်တာ အချက်အလက်နဲ စကားလုံးက အတော် ပိုင်တာနော။ ကျနော်……ko biker ကို ပိုကြိုက်တယ်……။ အသက်ကြီးတိုင်းအလေးမစီးဘူးဗျ။ အသက်က ဂဏန်းဘဲ။ အရေအတွက်ဘဲ။ ဘာဘဲပြော ပြေးတာရော……ဝိတ်ရော တွက်ကြည့်ရင် ဆရာလုပ်သူသည် သုံးစားမရ။
မောင်ချစ်အမည်ခံပုဂိုလ်ခင်ဗျား။ ခင်ဗျားရဲ့အသက်ကိုတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားပြောတော့ စကားအရာမှာလဲ တစ်လုံးချင်းစစ်ရင်တောင် အသက်ကြီးတဲ့ဆရာကပိုရိုင်းပါတယ် တဲ့။ ခင်ဗျားအသုံးအနှုန်းကလည်း အပြုသဘောကိုမဆောင်သလိုပဲခင်ဗျ။ ဘာတဲ့ ဆရာလုပ်သူသည် သုံးစားမရတဲ့လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကို biker ကိုရော၊ ဆရာ့ကိုပါလေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာ ၀င်မဆုံးဖြတ်ရဲဘူးဗျ။ ခင်ဗျားလိုသတ္တိမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
သုံးစားမရဘူးထင်ရင် ပို့စ်တွေရော comment တွေရော သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး လိုက်ဖတ်မနေသင့်ဘူး လူငယ်ကလဲ သူ့အမြင်ပြောတယ် လူကြီးကလဲ စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် မေးတဲ့သူတွေလဲရှိနေတဲ့အတွက် စေတနာထား အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးတာပဲလေ
ခင်ဗျားသာ သူ့အရွယ်ရောက်ရင် ကြောင်သူတော်အကွက် မနင်းပဲ public မှာ ချပြရဲတဲ့ စိတ်မျိုးကို အရင်မွေးလိုက်အုံး
ဒဲ့ပြောနေတဲ့သူတွေ အမြင်ချင်းမတူလို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ၂ ယောက်တောင် ခင်ဗျားလို တဖတ်သတ် ရှုံ့ချပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်စော်ကားမနေဘူးလေ
ဘေးကနေ မီးလိုက်ရှို့မနေပါနဲ့ မောင်ချစ်ဆိုတဲ့ကောင်ရေ
တင်ပြချက်တွေကောင်းပါတယ်…ဒါပေမယ့်..ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မ နဲ့ မောင် ရဲ့ သဘောထားက အရေးအကြီးဆုံးပါဘဲ….သဘာဝဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားလေးကြောင့် အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ချစ်သူတွေကိုတော့ မထိခိုက်စေချင်ဘုး…မ
နဲ့ မောင်သာ သေချာဆွေးနွေးကြပါအုံး…ပြီးတော့..ဒိအပိုင်းမှာတော့.မရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားတဲ့အပိုင်းတွေ ရှိနေသလိုပါဘဲ..လေးစားလျက်
If you say love is nothing after marriage, why there are some couples who can keep their long term relationship? If you say so,boys and girls are getting married only for sex? So, all guys care only sex after marriage?
ကိုတိတ်တိတ်\_ မတိတ်တိတ်ရေ။ လက်ထပ်ပြီးသွားရင်အချစ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကိုကြီးကျော်က ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်သလောက်ရှင်းပြမယ်။လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ အချစ်ရဲ့ သင်္ချိုင်းလို့တော့ပြောကြတယ်။မြန်မာ့လူ့ဘောင်မှာ လက်ထပ်ပြီးသွားရင် အချစ်သစ်တွေ အီစီကလီတွေ ထပ်လုပ်ဖို့မသင့်တော်တော့လို့ ဒီစကားဖြစ်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးလဲ ကြင်ကြင်နာနာယုယုယယနဲ့ ရှိကြတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ကိုကြီးကျော်ပြောချင်တာက အချစ်အချစ်နဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်တုံးမှာ အရူးထကြ ရင့်ကျက်ချိန်မှာကျတော့ ဒီဘာမှန်းမသိတော့တဲ့ကိစ္စကြီးကိုပဲအဟုတ်လုပ်အကဲပိုနေကြတဲ့ လူတွေကို ထေ့ချင်ငေါ့ချင်ပုံနဲ့ရေးပြနေပုံရပါတယ်။ချစ်လှပါတယ်ဆိုပြီး နောက်တော့လဲ ဒီစခန်းကိုပဲ ဦးတည်ကြတာကို ရည်ညွှန်းချင်တာပါ။လက်ထပ်ပြီးသွားချိန်မှာ ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အချိန်တုန်းက ဖုံးကွယ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့အပြစ်အနာအဆာကိုလဲ ကျန်တစ်ယောက်ကမြင်လာရပြီလေ။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါ အချစ်တွေ လျော့ကြတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်များ အချို့စုံတွဲတွေ ကြာရှည်လက်တွဲခိုင်ခိုင်မြဲနေကြရသလဲ ဆိုတော့ တိုးပွါးလာတဲ့ အစွယ်အပွါးသံယောဇဉ် အနှောင်အဖွဲ့ တွေရယ်၊တာဝန်သိစိတ်တွေရယ်၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနားလည် အလျှော့ပေးမှုတွေရယ်နဲ့ ညှိနှိုင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ မိန်းမနဲ့ယောက်ျား လိင်ကိစ္စအတွက်သက်သက်ပဲ လက်ထပ်ကြတာမဟုတ်ပေမယ့် ချစ်လှပါချည်ရဲ့ ဆိုပြီး မထိရက် မကိုင်ရက် အလှထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ ပုထုဇဉ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိမှာလဲဗျာ။ နောက်ဆုံးတော့ ဟိုဘူတာ ဟိုစခန်းကိုပဲဦးတည်ပြီးမောင်းသွား ကြတာပဲလေ။ယောက်ကျားအာလုံးဟာ လက်ထပ်ပြီးသွားရင် ဒီလိင်ကိစ္စအတွက်ပဲလား ဆိုတာကတော့ အန္ဓပုထုဇဉ်လူညံ့ ယောက်ျားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူလုပ်ကျွေးချင်စိတ်မရှိပဲနဲ့တော့ ယောက်ျားတွေ လက်မထပ်ကြပါဘူး။ အဲဒီအစားလက်လီဝယ်စားနေလို့ရပါတယ်(စကားရိုင်းသွားရင် ဝန္ဒာမိပါ။)
ဗဟုသုတတွေရတဲ့အတွက် ဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ယောကျာင်္းတွေကို မယုံရဲတော့ဘူးဆရာ အများစုလို့ရေးထားတဲ့အတွက် အတော်လန့်နေမိပါတယ် သ၀န်တိုတတ်တဲ့သူဖြစ်နေတော့ ဆရာ့ဇနီးလိုသာဆို စိတ်ဆင်းရဲလို့ အသက်တိုမှာသေချာတယ် 😦
ဆရာ အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆရာ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းခဲ့သလဲ ဆိုတာလေးပဲ သိချင်ပါတယ်။ ဆရာ ပြောသလို ကြောင်သူတော်တွေများတဲ့ လောကထဲမှာ ကျမလည်း မိန်းမတစ်ယောက်မို့ တစ်ချိန်ချိန် ကြုံလာခဲ့ရင် ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း ရှိအောင်ပါ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းတရားက အသိတရား ပြန်ရစေခဲ့ပါသလဲ? ဆရာ့အမျိုးသမီးကြောင့်လား? သားကြောင့်လား? သမီးကြောင့်လား? အဲဒီအမျိုးသမီးကြောင့်လား? အဲဒီအမျိုးသမီးကကော အုပ်ထိန်းမှု တစ်ခုခုအောက်က မလွတ်ကင်းနိုင်သေးတဲ့ (သူတစ်ပါးရဲ့သားပျိုသမီပျို) သူလား? ပြန်ဖြေပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်ဆရာ။
(၁) ကျွန်တော့် ဇနီးက အံ့သြစရာ ကောင်းအောင် လိုက်လျောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးတာပဲ၊ သူ့ဘက်က စွန့်လွှတ်ပေးပါ့မယ်လို့သာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
(၂) ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တအား မွှန်နေတာကို သိနေတယ်။ အဲဒီ့ မွှန်စိတ် ကွယ်ပျောက်တဲ့အထိ နေခဲ့ပါတယ်။ မွှန်စိတ် ပျောက်သွားချိန်မှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်အထိ ကျွန်တော့်ဇနီးဘက်ကလည်း အလိုက်သင့် နေပေးခဲ့ပါတယ်။
(၃) နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော့်အနွံအတာကို သိပ်ခံလွန်းတဲ့ ဇနီးသည်ကို အားနာလွန်းမက အားနာလာမိရလို့ ကျွန်တော် အားလုံးကို ကိုယ်ရှိန်သတ်လိုက်တာပါ။
(၄) သူများ သားပျို သမီးပျို ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ ကျွန်တော့်ထက် ၁၈ နှစ်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့် အသက်က ၄၃ နှစ်မို့ သူ့အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အသက် အစိတ် အရွယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရွယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဓလေ့အရ မိဘနဲ့ မခွဲမခွာ နေနေသေးသည့်တိုင် အရွယ်မရောက်သေးသူ မဟုတ်တော့သလို ဆင်ခြင်ဉာဏ် မရှိတော့တဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကာမပိုင် လင်ယောက်ျား မရှိပေမယ့် သည်အရွယ်မှာ ရည်းစားလည်း ရှိဖူးပြီး ထားဖူးပြီးသား အရွယ်ပါခင်ဗျား။
ဆရာရေ သတိထားပေတော့ ဘေးတီးတွေ များနေပီ….. 😀 ဆရာဖတ်ဆိုလို့သာ လေးစားသမှု့နဲ့
( ဆရာ့ကို နော်….)
ဖတ်လိုက်ရတာ….. မျက်စေ့တောင် အတော်ညောင်းသွားပါတယ်…… ဆရာ
အချိန်ရတိုင်းဝင်ဖတ်နေတာ ၃ ရက်ရှိပါပြီ…… ကျွန်တော့လိုလူတွေကို သနားသောအားဖြစ့်ပေါ့ ဆရာ
အကြံပေးတာပါ …. 🙂
အကျိုးမရှိတဲ့ ကွန့်မန်တွေဆို ခဏတန်သည်သာထားပြီး ရှင်းလိုက်စေလိုပါတယ်
( အားလုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး ) ဆရာ့သဘောပါဆရာ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ကို အဖိုးတန်လှတဲ့ အကြံပြုချက်ပါ။ ရှင်းတော့ မပစ်ပါဘူး။ သူ့အရှိန်နဲ့သူ လွှတ်ပေးထားလိုက်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် ခင်ဗျား။
သေသပ် ပိုင်နိုင်လှတဲ့ စကားရည်လုပွဲ လေးပါပဲ ….. အချည် အတုပ် ၊ အရှောင်အတိမ်းတွေနဲ့ တော်တော်လှတာပဲ
ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ ….. ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်တယ် လို့ ထင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို အများဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ညှိတာပါပဲ…. ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိမှ လည်း ဆွေးနွေးပွဲလေးက အသက်ဝင်လာမှာ….. ကျွန်တော် biker ဘက်ကထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် … လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်ဟာ အချိန်အခါ ၊ အသက်အရွယ်၊ ရာသီဥတု အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့်အသက် ၅၄ နှစ်လောက်ရောက်ရင်တော့ ဆရာ့ ဘက်က ထောက်ခံကောင်း ထောက်ခံမိ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စကား ဘယ်တွေ ရောက်နေလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာစေချင်ပါတယ် ပြောချင်တာက ကလေး တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ အေးချမ်းတဲ့ စကားကိုပြောတာ ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ ။ကိုယ့်ထက်ပညာတတ်တဲ့ ဆရာ့လို လူတစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို နားထောင်တာ ဟာ သင့်မြတ်လှပါတယ် ခင်ဗျာ
သည် စာမျက်နှာကို ထားထားခြင်းဟာ အများပရိသတ် ဆင်ခြင်စရာ ရှိ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် တွေးစရာလေးတွေ ချပြ၊ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှပေးဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအတင် စကားစစ်ထိုးဖို့၊ စကားရည် လုဖို့ သည်စာမျက်နှာကို တင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး
အထက်မှာ တစ်ယောက်က ရေးထားတယ်။ သူ့အသက် ၅၄ နှစ်လောက် ရောက်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ထောက်ခံကောင်း ထောက်ခံမိနိုင်ပါသတဲ့။
သိပ်မှန်ပါတယ်။ သည်မှာ လာဆွေးနွေးတဲ့ လူအတော်များများဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် နုငယ်တဲ့ အရွယ်လေးတွေပါ။ ဘ၀အတွေ့အကြုံအားဖြင့် မများလှသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်အရွယ်နဲ့လည်း ကျွန်တော် မသိသေးတာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ သင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် သေတဲ့အထိ သင်ယူနေရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ပါပဲ။
အတွေ့အကြုံကို အသာထားပါ။ စာဖတ်သူချင်းတူနေမယ်ဆိုရင်တောင် အသက်အရွယ်ချင်း ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ အသက် ၃၀ အရွယ်နဲ့ အသက် ၆၀ ကြားမှာ ကွာဟချက်က နှစ်ဆ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ၃၀ အရွယ်က သူ့တစ်သက်မှာ အုပ်ပေါင်း ငါးထောင်လောက် ဖတ်ဖူးထားတာကို များလှပြီ မှတ်နိုင်ပေမယ့် ၆၀ အရွယ်က သူ့ရှေ့တစ်မျိုးဆက်ပါ ထည့်ပေါင်းရင် အုပ်ပေါင်း တစ်သောင်းလောက် ဖတ်ဖူးထားနိုင်ပါတယ်။ သည်အခါမှာ အမြင်ခြင်းက ကွာနေတော့မှာပါ။
ဆရာတော် ဦးဇောတိကကတော့ အဲဒါကို လိပ်ပြာနဲ့ တီကောင်လို့ နှိုင်းဖူးတယ်။ လိပ်ပြာလေးက ပန်းရောင်စုံလေးတွေ လှတဲ့အကြောင်း၊ လေဟုန်စီးရတာ ဘယ်လို ကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောရင် တီကောင်လေးက ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ခြေကန် ငြင်းနေမှာပေါ့တဲ့။ ဖြစ်တည်မှုအဆင့် (level of being) က အရာရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါ။
အခြေအတင်တွေ ထပ်မပြောချင်တော့လို့ သည်ပို့(စ်)မှာ ကွန်မန့် ရေးတာကို ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အထက်မှာ အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်း သည်စာမျက်နှာဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ၊ ဘာသာရေးတွေ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေ၊ ဖြစ်သင့်တာတွေကို ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမဟုတ်ပါဘူး။
လူ့စိတ်နဲ့ လူ့အပြုအမူပေါ် အခြေခံပြီး လူအများစု လုပ်ဖြစ်ကိုင်ဖြစ်တတ်တာတွေကို ဆွေးနွေးပေးနေတာပါ။
တစ်နည်း ပြောရင် ခြွင်းချက်တွေကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျတွေကို ပြောနေတာပါ။
အဲဒါကို ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ လာကိုင်ပေါက်ပြီး ခြွင်းချက်တွေကို ထောက်ပြနေတော့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်မန့် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
ပိတ်လိုက်တော့ ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ခံစားထားရသူတစ်ဦးက အဖွင့် စာမျက်နှာမှာ သည်အကြောင်းကို ဆက်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ သူ့ ကွန်မန့်ကို https://nookycontent.wordpress.com/#comment-2458 မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သစ္စာတွေ မေတ္တာတွေက သိပ်ပြောလို့ လှတဲ့ စကားရပ်တွေပါ။ ယောက်ျားတွေမှာ ငယ်ပါ မပါဘူးဆိုရင်တော့လည်း အဲဒီ့ သစ္စာမေတ္တာတွေက အလုပ်ဖြစ်နေမှာ မလွဲပါဘူး။ ငယ်ပါ ပါနေသမျှတော့ ပါးစပ်ရှိရင် ချို၊ ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်၊ ဖန်၊ ခါး ရသာမှန်သမျှ စားချင်မိရတတ်သလို၊ နှာခေါင်းပါတော့လည်း အနံ့ ကောင်းလေးများကိုသာ ခံချင်ပြီး အနံ့ဆိုးမှန်သမျှ ရှောင်ချင်တတ်သလို၊ နားရွက်ပါတော့လည်း ဆူညံသံထက် သာယာသံကို မက်မိတတ်သလို၊ မျက်စိပါတော့လည်း ရသစုံလင် မြင်ချင်မိတတ်ကြသလိုသာ ရှိမှာမို့ ခြေကန်ငြင်းချင်သပဆိုလည်း ထိုင်သာ ငြင်းကြပေတော့။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခွန်းမှ ပြန်ပြောတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လာဆွေးနွေးသမျှကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်နေလိုက်မှာပါ။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကို နေ့စွဲရက်စွဲ အတိအကျနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ မှတ်ထားလိုက်ပါလို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ နောက် နှစ် ၂၀၊ နှစ် ၃၀ ကြာတဲ့အခါ ပြန်ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့ပါ။ နောက် နှစ် ၂၀၊ ၃၀ အကြာမှာ အမြင်မပြောင်းဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အယူအဆ မှန်လို့ပေါ့။
နောက်ဆုံးတော့ဗျာ အချိန်က အားလုံးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါပဲလေ။
ဆရာက ကျွန်တော် တစ်လောက်မေးချင်ပါတယ်….ကျွန်တော် မှာချစ်သူရှိပါတယ်…သူရဲ့အသက်က ၃၅နှစ်ပါကျွန်တော်က၂၆နှစ်ပါ…..အဲ့ဒါ ကောင်းမကောင်းကို ဆရာ ရဲ့ အမြင်လေးပြောပြပါလား..ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
အပေါ်မှာ အပြည့်အစုံ ရေးပြီးသားကို ကျွန်တော့် အမြင် ထပ်ပြောခိုင်းနေတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲဗျာ။ အပေါ်က ပို့(စ်)ကိုပဲ သက်စေ့ ပြန်ဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျ။ 😦
အင်း ဒီနေ့ တော်တော်သိလိုက်ရသလိုပါပဲ ဗဟုသုတွေ ။ အဲ လမ်းမှားရောက်တော့မလို့ တော်ပါသေးတယ် ဘာမှမထည့်မိတာ ။ ဆရာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ( သူများဆရာခေါ်လို့ သာ ခေါ်ရတာ စာရေးဆရာ ကြီးထင်ပါတယ် နော် )
ဆရာ ခင်ဗျ ..မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ ဖြစ်နိုင်ရင် အမြန်စာပြန်စေချင်ပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက အတူနေတဲ့အခါ ကလေးရမှာစိုးရိမ်လို့..မနေဖြစ်ပါဘူးး…ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေတော့ သူက ပါးစပ်နဲ့ပဲ sex လုပ်ပေးပါတယ်.. ပြီးတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်လေ သုတ်အနည်းငယ်ပါးစပ်ထဲသိုးဝင်သွားပါတယ်..အဲ့ဒါကကိုယ်ဝန်ရစေလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျ…ဖြစ်နိုင်ရင် …..Reply ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်..အရေးကြီးလို့ပါခင်ဗျ…လက်ထပ်ဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်သေးလို့ပါ..။
သည်ဆိုက်ထဲက စာတွေရော ကွန်မန့်တွေရော စုံအောင်ဖတ်လိုက်ရင် အဖြေတွေ ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးလို့ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က အဲလောက်တော့ ကြိုးစားပေါ့နော်။
Biker နဲ့ ဆရာနဲ့ ကိုက်
လူတွေ အားလုံးကြိုက် right?
Mr.funnyguy ရေ ကာရန်နဲ့စာချိုးလေးဖွဲ့တတ်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတော့လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ” ကိုက် ” ဆိုတဲ့နေရာမှာ ” fight “ဆိုရင်ပိုပြီး ယဉ်ကျေးသွားမယ်ထင်တယ်။ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲပေါ့လေ။
အရေးအသားလေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်နော်…အခုလိုရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ဆိုဒ်ဆိုတာမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာ…ဒီဆိုဒ်တစ်ခုပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်..(ကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေကို ကျွန်တော်မသိတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)ဆရာရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေကိုဖတ်ရတာတကယ်ပဲဗဟုသုတရပါတယ်..တစ်ချို့တွေဆို`ဘု´မသိ`ဘ´မသိနဲ့ရောဂါတွေတပုံကြီးရပြီးမှနောင်တရနေကြတာပါ…ကျွန်တော်အရင်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတလေးတွေကို မတောက်တခေါက်ပညာလေးနဲ့ဘာသာပြန်ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..သိပ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပေမယ့်နည်းနည်းတော့သိခဲ့တာပေါ့…ဆရာ့ဆိုဒ်ထဲကဖတ်ရတဲ့ကွန်မန့်တစ်ခုစာလောက်တောင်ရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်…တကယ်ဆိုဒီအရာတွေကလူတိုင်းဖတ်သင့် သိထားသင့်တာတွေပါနော်…ဒါကိုပဲလူတွေက..ရှက်စရာ..ဘာညာနဲ့..ရှောင်ရှောင်သွားတတ်ကြပါတယ်..တကယ်တော့အဲ့လိုလူတွေလည်းလိင်ကိစ္စကိုလုပ်မယ့်သူတွေပါပဲလေ…အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်လည်းလူထဲကလူတစ်ယောက်ပါပဲ…ဒီကိစ္စတော့ လိုချင်တာပေါ့…ဒါပေမယ့်မရဲဘူးခင်ဗျ…သိက္ခာဆိုတဲ့အရာကြီးကခံနေတော့ တော်တော်ထိန်းသိမ်းထားရတယ်..အဟီး…ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ဖြေတာတော့လုပ်တာပေါ့…လက်တွေကိုပြောတာပါ…တစ်ခါတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့…ဟိုနေရာကိုရောက်ဖူးပါတယ်..ဒါပေမယ့်စိတ်မပါဘူးဆရာရေ…ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူး…ကျွန်တော့်ညီက ထကိုမထ တာ…အံ့ရော…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပန်းသေနေလားလို့တောင်လန့်တယ်ဆရာ…ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး အရှင်လတ်လတ်ကြီးပါ…တစ်ခုရှိတာက…ကျွန်တော်ကြောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်…တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး…ရောဂါရမှာတော့တော်တော်ကြောက်တယ်ဆရာ…ပြီးတော့ကျွန်တော့်မှာလည်းရည်းစားရှိတယ်လေ…သူ့မျက်နှာလေးပြေးမြင်ပြီး…အဲ့ဒီအထဲကအလုပ်သမကိုစိတ်မပါတော့ဘူးဗျို့…ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့…ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာ..ဘာလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပြောလိုက်ကြတာ သရေကျချင်စရာပါပဲ…ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကလွဲလို့ တစ်ခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့..အဲ့လိုမဆက်ဆံချင်ဘူးလေ…အခုဆိုရင်တစ်ခြားအပြင်စာတွေရောဆရာရေးပြထားတဲ့စာတွေပါဖတ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းသိလာပါတယ်…တစ်ခြားသူတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးချင်ပါတယ်..မမှားသင့်တာတွေမမှားရအောင်ပေါ့…ဆရာ့ကိုလည်းလေးစားပါတယ်….ကျွန်တော့်အသက်ကအခုဆို 23 ပြည့်တော့မှာပါ…ကျွန်တော့်ကောင်မလေးအသက်ကခုမှ17ကျော်ကျော်လေးပဲရှိပါသေသးတယ်…ဆရာ…တစ်ခုလောက်မေးချင်တာက..ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုရင်သိပ်မဆိုးလောက်ပါဘူးနော်…အဟီး…အားလည်းနာပါတယ်…လေးလည်းလေးစားပါတယ်…နည်းနည်းလောက်တော့ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ..
ဒါကတော့ ပြုကြည့်မှ သိရမှာပဲလေ။ ကျွန်ုပ်ဗေဒင်ဆရာ မဟုတ်သဖြင့် အတတ်မဟောနိုင်ပါ။ 🙂
Va Gyann permalink
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျနော်အတွက်ကတော့ ဆုံးမစကားတစ်ခုပါပဲ ဆရာ
မဆိုးပါဘူး But Mr.biker နဲ့ case ကဆက်ပြီးဖြေရှင်းသင့်တယ်.ရေးမနိုင်တော.တာလား၊ဖြေရှင်းမတတ်တော့တာလား။
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ သိပ်သတိထားရတယ်။ အစတစ်ခု ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ဆွေးနွေးပေးနေသမျှ အကြောရှည်တတ်တယ်။ သိပ်အားယားနေရင်တော့လည်း တစ်မျိုးပေါ့လေ။ စေတနာသည် လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဆိုတာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပိုထင်ရှားပါတယ် ခင်ဗျား။
Aye Myintmo permalink
ဆရာ့အတွေ့အကြုံကို…မခြွင်းမချန်ဖွင့်ပြပြီး..ပညာပေးတာလေးစားပါတယ်ဆရာ….လောကမှာ…အတွင်းစိတ်သောင်းကျန်းတာကို…ဖုံးကွယ်ပြီး…ကြောင်သူတော်..ကြွက်သူခိုးလုပ်ကြတဲ့..ယောက်ျားတွေများလွန်လွန်းလို့…ဒါပေမယ့်..အသက်ရလာတော့…ယောက်ျားတွေကို…အပြစ်မမြင်တော့သလို…အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး…သစ္စာရှိဖို့..သိပ်ပြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတာ..သိလာလို့ပါပဲ..ယောက်ျားတွေ(အဖိုတွေ)ရဲ့…ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက…အဲဒီလို..ဖြစ်ဖို့ကို…သဘာဝတရားကြီးက..ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ပဲ..လက်ခံထားပါတယ်…မိန်းမတွေရဲ့ကာမစိတ်ကိုလဲ…လျှော့တွက်လို့မရပါဘူး…လိင်ဆက်ဆံပြီးရင်…ဗိုက်ကြီးနိုင်တာရယ်…မန်းမဆိုတော့..ဒီကိစ္စမှာ..ယောက်ျားရဲ့ချယ်လှယ်မှုကအခရာဆိုတာကို…မခံချင်တဲ့အငုံ့စိတ်ရယ်ကြောင့်…(ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကတော့…တော်ရုံတန်ရုံမိန်းမတွေအတွက်ကတော့…ဗိုက်မကြီးရင်အပျိုပဲလေဆိုပြီးထီမထင်ကြပါဘူး)…အနောက်နိုင်ငံကလို…single mother တွေအားပေးရင်တော့..မိန်းမတွေဒီကိစ္စမှာ..ပွင့်လင်းလာလေလေ..ယောက်ျားတွေ…နှာဘူးကျတယ်ဆိုတာ..မိန်းမတွေ.အတွက်သိပ်ဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်တာသိလာလေလေ…ဖြစ်လာမှာပဲ…ဒါကိုပဲ..ပညာသားပါပါ..အသုံးချနိုင်တဲ့မိန်းမတွေက…သူများထက်သာသွားမှာပါပဲလေ…sex ကိစ္စဟာလူတွေကို တော်တော်လွှမ်းမိုးပါတယ်…ဘယ်လောက်ပဲလွှမ်းမိုးပါစေ…ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး…သူ့ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုသိမယ်…sex လွှမ်းမိုးမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့..နည်းမှန်လမ်းမှန်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်…ကိုယ့်ဘဝအတွက်လဲ တော်တော်လေး ကိုအရေးပါပြီး..အကျိုးရှိပါ့မယ်…
မမြင့်မိုရ်ရေ ငါ့ညီမမှာယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်လိုစိတ်နာကျည်းခံစားချက် ရှိနေတယ် ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အတွင်းစိတ်သောင်းကျန်းမှုရဲ့နောက်ကို ခန္ဓာကိုယ်လိုက်ပါမသွားအောင် ထိန်းထားနိုင်တဲ့ပုရိသတွေလည်း ဒီဒွန္နယာကြီးထဲမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိစေချင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတိုင်းကတော့နှာဘူးပါ၊ ဒါပေမယ့် နှာဘူးတိုင်းတော့မဖောက်ပြန်ကြပါဘူး။ ငါ့ညီမပြောသလိုပဲ လိင်ကိစ္စဆိုတာ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့မှီဝဲမယ်ဆိုရင် စိတ်လက်ပျော်ရွှင်သက်ရှည် ကျန်းမာစေ တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ “အိမ်ထောင်ပြုသူများက ပိုမိုအသက်ရှည်စွာနေထိုင်နိုင်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။
အသက်ကြီးလာတော့…ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့အချစ်သန့်သန့်ဝတ္ထုတွေအကြောင်းပြန်တွေးပြီးရယ်ချင်တယ်…အချစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ…ပြဿ နာတွေက..အများသားကလား..(များသောအားဖြင့်…90 % လောက်က အချစ်ဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးကို…စွပ်ပြီးလာတဲ့…လိင်စိတ်)ကြောင့်ပေါ့…
ဆရာ သိချင်တာလေး ရှိ လို့ မေး ပါရစေ
may ချစ်သူက may ကိုချစ် လို့ အဲ ဒီ စိတ် ဖြစ် ချင်
တယ် ဆို တာ ဖြစ် နိုင် ပါ့မ လား တ ခြား မိန်း က လေး တွေ ကို မြင် ရင် ကော မ ဖြစ် ဖူး လား may
က တော့ သူ့ ကို အ ရမ်း ချစ် တယ် မ ခွဲ နိုင် ဘူး
ဆရာ may ချစ် သူ က may ထက် 4နှစ် ငယ် တယ်
ဆရာ ပြော သ လို ယူ ပီး မှ ထား ခဲ့ ရင် ဘယ် လို လုပ်မလဲ ဆရာ အ ကြံ ပေး လို့ ရနိုင် မလား သူ က may ရဲ့ ပ ထ မ ဆုံး နဲ့ နောက် ဆုံး ချစ် သူ ပါ သူ က လွဲ ရင် ဘယ် သူ့ ကို မှ မ ယူ ချင် ဘူး သူ က လည်း
may သာ အ ဆင် သင့် ဖြစ် ရင် လက် ထပ် ချင် တယ် တဲ့ may တို့2ယောက် ချစ် လာ တာ3 နှစ် ကျော် ပါ ပီ
သူ့ ကို ပ ထ မ ဆုံး
ဆရာခင်​ဗျာ အဲ့လိုမမကြီး​တွေဘက်​က​နေ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ ဆိုတာ အကြံ​ပေးပါလားခင်​ဗျာ
Nan Da Aung Lin permalink
ဖတ်ရတာ သဘောတွေ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေမို့ ဒါအမှန်ပဲလို့ မယူဆပါဘူးဆရာ
Zon Pyae Phyo Oo permalink
ကျွန်မအသက် ၁၉ နှစ်ပါ
ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မချစ်သူ ကမိဘတွေသဘောတူထားတာပါ။ ၁လပိုင်းလောက်ကကျွန်မတို့ sex ကိစ္စဖြစ်သွားပါတယ်။
၃ရက်အတွင်း Ecee2 သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂လုံးစလုံးကို တပြိုင်ထဲသောက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
၁လခွဲလောက်ကြာမှ အန်ချင်သလိုတွေဖြစ်လာပါတယ်။အန်တော့မအန်ဘူးဆရာ။ ရာသီလဲလုံးဝမလာပါဘူး။